Sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus Band | Androidsis
Tao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia miresaka momba ny fehin-tànana voalohany isa hatolotr'i OnePlus ho antsika izahay, fehin-tànana raha voamarina ny tsaho. haseho amin'ny fomba ofisialy any India ny 11 Janoary. Azo inoana fa hahatratra ny tsena eo an-toerana ny androtr'iny, hatramin'ny fampiharana hitantanana azy, Azo alaina ao amin'ny Play Store izao.
Miresaka momba ny fampiharana OnePlus Health izahay, fampiharana iray hikarakara raketo an-tsoratra ny fampahalalana rehetra azon'ny OnePlus Band. Amin'ireo sary miaraka amin'ity rindrambaiko ity dia ahitantsika ny volavola sy ny sasany amin'ireo sehatra ho hitan'ny mpampiasa ao amin'ity fehin-tànana miisa vaovao ity izay hahatratra tsena feno vina.
Araka ny hitantsika amin'ny sarin'ny fampiharana miampy ny famaritana, hamela anay ny OnePlus Health raketo ny fitepon'ny fontsika dia hanara-maso ny torimasantsika izany.
Hitanay ihany koa ny fomba hananan'ilay fehin-tanana fahaizana Araho ny toerana misy anay, noho izany dia manome soso-kevitra fa hanana puce GPS izy, fampahalalana izay raha nohamafisina dia fomba hafa mahaliana tokony hikajiana ao amin'ity tsena ity, satria vitsy dia vitsy ny bracelet miisa mampiditra azy.
Azo inoana koa fa ny fampahalalana amin'ny zotra alaivo amin'ny alàlan'ny smartphone izay ampifandraisina. Raha izany dia ho bracelet iray eny an-tsena indray ny OnePlus Band ary mety tsy ho voamariky ny olona.
Araka ny sary eo alohan'ilay fangatahana, ny OnePlus Band dia manana famolavolana tena mitovy amin'ity karazana hazakazaka fanatanjahan-tena ity toy ny Mi Band 5 nefa tsy mandeha lavitra intsony. Manana efijery AMOLED 1.1-inch izy, fanoherana ny rano sy vovoka IP68 voamarina, ary vidiny amin'ny $ 30- $ 35.
Ny fampiharana amin'izao fotoana izao tsy azo sintonina Ary hijanona tsy ho afaka izany mandra-pivoakan'ny OnePlus Band. India no ho firenena voalohany ahatongavany ary amin'izao fotoana izao tsy fantatsika ny drafitra fanitarana ny OnePlus miaraka amin'ity bracelet ity, drafitra izay mety haseho amin'ny herinandro ambony amin'ny fotoana fampisehoana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus Band
Mad Cars dia lalao goavambe tena adala izay ampidirinao fiara amin'ny dianao